Ukotini, satin, Calico, poplin - okungukuthi, mhlawumbe, uhlu main izindwangu zemvelo, ikakhulukazi abesifazane esizithandayo. Akumangalisi, ngemva bonke bathunga amahembe igqoka, amabhulukwe amafushane umndeni indlovukazi yakhe yonke imisebenzi, isilwane izingubo ezishibhile futhi bejabule.
imishini ngitshiyoza hhayi kuphela maqhugwane ka bakule ndawo, kodwa futhi ezindlini zasemadolobheni, futhi eminyakeni lasendulo, angazange aphakanyiselwe inaliti ngesandla uthunge ndawonye izingcezu ukotini Indwangu odezhku emibalabala bonke izikhathi. Kodwa izingubo zemikhosi, yebo, kroili poplin. Izibuyekezo umphetho noma ibhantshi aphume kwawo kwakukhona esijabulisa kunazo zonke ekuphileni.
Izici izicubu kanye ukukhiqizwa
Manje kwanikela enwetshiwe ububanzi izindwangu nezitolo elwela sipho ukuthenga izingubo poplin, blouses, amaphijama, amashidi. Yini enye engcono, isibonelo, isimo sezulu esifudumele kuka sarafanchik zikakotini okungahambisani crumple, musa fade futhi akaphelelwa umumo? Indwangu poplin kuphela, okuyinto libuyekeza simbonge kakhulu ngokwenzenjalo. Abesifazane bakithi kakhulu othanda ngokugqoka izingubo ezenziwe izicubu zomzimba ezithambile kanye ithenda.
Kungani-ke ukuthi ulunge kakhulu? Imfihlo yokukhiqiza ubuchwepheshe ekhethekile, nesuka Ephakathi eFrance. Nakuba izwe yayilula futhi abantu abadinga izingubo izindwangu. Ngakho lapho poplin. Izibuyekezo sakhe walondoloza isikhathi eside e zomlando zomlando. Its Welukwa lokuluhlaza eqine ezahlukene - ngesisekelo izacile, weft mkhulu. Ngakho ikakhulukazi ukuthungwa - umphetho.
Uyini funa samanje Poplin? Izibuyekezo zomthengi wanamuhla ukufakazela kwayo okukhulu ekhaya. Demand lukhula, nabadayisi eziningi anikele izindwangu lwezeMpilo Usizo, futhi imikhiqizo ithungwe zinhle kakhulu. Lokho akusimangazi ngoba Poplin - oshibhile kodwa eliphezulu kakhulu izinga lendwangu, ngezinye izikhathi esisemqoka ezimweni zansuku zonke. Kuyinto eqinile ezithambile ngesikhathi esifanayo, kulula ukuba wageza ngaphansi kwamazinga okushisa aphansi futhi akudingeki ayina. Kule ngombono, Poplin futhi ukonga kakhulu ukusebenza. Yingakho besifazane abaningi abathanda thunga kusukela poplin amashidi futhi pillowcases, izingubo zokulala kanye amathawula ngekwetinhloso letehlukene.
Umbala futhi ukudaya ubuchwepheshe kakhulu ehlotshisiwe poplin. Izibuyekezo abesifazane lokhu izicubu nomdlandla kakhulu: lula, esiwusizo, elikhanyayo, ehlukahlukene in umbala ngesikhathi esifanayo ukumelana nokuhuzuka. Yiqiniso, kulesi simo sikhuluma izinga poplin zikakotini okumsulwa.
It is ihlinzekwa amashidi Ivanovo. Poplin, ukubuyekezwa zazo ezinhle kakhulu, lisetshenziswe ukukhiqizwa high kuphela. Nale ikhithi labo abenziwe ezaziwayo izimboni ingubo Ivanovo, njengezinye eziningi. A ezihlukahlukene ongakhetha ejabulisa iso ngempela esiyingqayizivele colorings - imidwebo kanye yezicathulo adalwe abaklami.
Buttercup nezimvemvane, Belaya Roza neminduze okwesibhakabhaka, Swirls, sikwele, nomhlobiso, openwork - lezi ezinye nje izingxenye inqwaba ukuhluka. Ivanovo abasebenzi yendwangu ukukhiqiza poplin amashidi futhi umbala imfashini kunazo - imibala kanye amaphetheni ku-3D. Umthelela stereoscopic iyona inkohliso izimbali fresh ehlakazekile embhedeni!
imibala efudumele futhi touch ezithambile - yilokho okwenza okuhle kakhulu poplin Indwangu ukusetshenziswa nsuku zonke.